Professional Services Isu Inopa | Popular Jewelry
Pano paRakakurumbira, isu hatisi tengesa zvishongo. Isu tinobatsira vatengi vedu kusarudza zvidimbu zvakanaka zvezvishongo zvinoenderana nemaitiro avo uye bhajeti. Kunyangwe iwe uri kuzvipa mubayiro iwe, kutenga chipo kune iyeye akakosha mumwe munhu, kana kupemberera yakakosha chiitiko / nhanho, iwe uchagutsikana nekutenga kwako.
Kutsvaga chimwe chinhu chakasarudzika; pachako? Anogadzira zvishongo zvemhando yepamusoro anogona kukubatsira kugadzira zvishongo zvako zvakajairika; ita kuti zvidimbu zvako zvehope zvioneke. Zvidimbu zvakagadzirwa-zvakaisvonaka zvishongo zvidimbu ndizvo zvinonyanya kukosha- iwo kuratidzwa kwekutaura kwako pachako. Mimwe mienzaniso yezvidimbu zvakagadzirwa zvakagadzirwa pazasi:
Tsika Yete Zvirongedzo zvemazuva ese, kuita kana kuroora
Goridhe Mazino (Grills)
zita Pmarita, Mazita Yezita, Mhete dzeZita, Mazita emaZita, nezvimwe.
Yakagadzirwa Yakagadzirwa Zvidimbu kana Mapenduru uye Manenji
Uye chero chimwe chinhu chaungafungidzira ... Dzidza zvimwe
Kugadzirisa / Kudzorera
Tinogona kugadzirisa, resize, uye dzorera zvishongo zvako kumamiriro ayo epakutanga. Isu tiri zvakare kukwanisa kukwidziridza uye kugadzirisa kutaridzika kwezvishongo zvako kune zvaunofarira. Mienzaniso yemasevhisi atinopa anosanganisira (asi haana kuganhurirwa kune) anotevera:
Electroplating / dipping (Rhodium, sirivha, uye Goridhe)
General Zvishongo Kugadziriswa
Kudzvanyirira / Welding
Tarisa Bhatiri Kutsiva
Kudzokorora & Zvimedu
Vane zvimwe zvishongo zvisingadiwe zvakarara zvakatenderedza imba zvichiunganidza guruva? Isu tinopa makotesheni edhaimondi, goridhe, uye platinum. Kune yako goridhe yezvimedu, iwe unogona kugamuchira mari kana chitoro chikwereti, icho chaunogona kugovera kune chitsva kutenga.
Uine imwe mibvunzo?
Taura nesu- isu tichafara kuvapindura uye
gadzirisa chero zvichemo zvaungave nazvo nezvedu
zvigadzirwa & masevhisi.
Mazuva manomwe pavhiki, mazuva makumi matatu nemakumi mana nemashanu pagore
New York City haifi yakarara, saka isuwo hatisi =)